आज तुलसी रोप्ने दिन: रुढीवाद कि विज्ञान? - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
आज तुलसी रोप्ने दिन: रुढीवाद कि विज्ञान?
पर्यटकहरुका लागि प्रसिद्ध भारतीय सहर गोवा पुगेका जो कसैलाई पनि त्यहाँको मनोरम प्रकृतिसँगै अनौठो धार्मिक संस्कृतिले लोभ्याउँछ। सयौं वर्षसम्म पोर्चुगलको उपनिवेश रहेको यो सहरमा हिन्दु जनसंख्या तुलनात्मक रुपमा कम छ। तर हिन्दु धर्मावलम्बी र इसाई धर्मावलम्बीहरुका घर घरमा हेर्ने हो भने प्रत्येकका घरअगाडि प्रतीक चिन्हहरु देखिन्छन्। जसरी हिन्दुहरुले आफ्ना घर अगाडि तुलसीको मठ बनाएर राख्छन्, त्यसरी नै इसाईहरुले पनि क्रसलाई तुलसीजस्तै मठ बनाएर राख्दा रहेछन्। यसरी आ–आफ्ना आस्थाका प्रतीकहरुलाई प्रदर्शन गर्ने त्यो चलन मलाई निकै रमाइलो लागेथ्यो। विषय धर्मको होइन, यहाँ प्रसंग उठाउन खोजिएको हो प्रतीकको बारेमा। त्यसमा पनि हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको प्रतीक, तुलसीको विषयमा। यसो विचार गरौं त, किन हिन्दु धर्ममा विश्वास गर्नेहरुलाई आ–आफ्ना घरका अघिल्तिर तुलसीको मठ बनाउनू भनी सुझाइयो होला। हरिशयनी एकादशी (तुलसीरोपण दिवस)को अवसरमा यसको चर्चा सान्दर्भिक पनि देखिन्छ।
त्यसो त हिन्दु धर्म विश्वमै त्यस्तो अनौठो धर्म हो जहाँ काग, कुकुर, सर्प, गाई, आदि जनावरदेखि तुलसी, बेल, कुश, वर, पिपल, आदि वनस्पतिहरुलाई ईश्वरको स्वरुप मानी पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। यसो विचार गर्ने हो भने यी सबै तत्वहरु यो पर्यावरणलाई बचाईराख्नका लागि नभई नहुने चिजहरु हुन्। समग्र इकोसिस्टमलाई नै धान्नका लागि यहाँ रहेका जनावर, प्राणी वनस्पतिहरु अत्यावश्यक हुने आधुनिक विज्ञानले बताइसकेको छ। पूर्वीय सभ्यताको प्राचीन विज्ञानले पनि यही यथार्थलाई आत्मसात गरी हरेक तवरले यिनको संरक्षणका विभिन्न उपायहरु बनाएको थियो। यी विविध प्राणीहरुको पूजा पनि त्यसैको एउटा प्रतिरुप हो। त्यस्तै तुलसीको स्थान त अन्य वनस्पतिहरुभन्दा अझ विशिष्ट मानिएको छ। हिन्दु पूजाविधिमा यसलाई अत्यावश्यक सामग्रीको रुपमा लिइएको पाइन्छ। धर्मशास्त्रहरुले भगवान विष्णुको प्रतीकका रुपमा तुलसीको उल्लेख गरेका छन्। अझ यसको विशेष महत्व रहेको कुरा त यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ की तुलसी बिजारोपण, रोपण र विवाह जस्ता अवसरलाई हिन्दु पात्रोमा प्रमुख दिनहरुको रुपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ। पूर्वीय दर्शनले यसलाई निकै नै महत्व दिएकाले होला पश्चिमाहरुमा पनि यो एउटा पवित्र वनस्पति हो भन्ने कुराको ज्ञान छ। त्यसैले त यसलाई अंग्रेजीमा होली बेसिल (Holy Basil) भन्ने नाम दिइएको छ। र यसलाई “जडिबुटीहरुकी रानी” समेत भनिन्छ। आखिर एउटा विरुवालाई छोरीजस्तै पालेर, बढाएर, विवाहसम्म गरिदिन किन आवश्यक छ? माथि भनिए झैं यी सबै प्रतीक हुन्। यसले त्यस विशेष वनस्पतिको कत्ति धेरै महत्ता छ भन्ने कुरा प्रतीकात्मक रुपमा भनिरहेका हुन्छन्।
हुन पनि तुलसीको बारेमा धेर थोर नजान्ने हामी नेपाली कमै छौं। जुनसुकै धर्म, जाति, लिंगको भएपनि यो बहुउपयोगी वनस्पतिको बारेमा हामी जानकार पक्कै छौं। तुलसी एउटा त्यस्तो विरुवा हो जसको सेवन त परै जाओस् संगत मात्र गर्दा पनि स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुग्छ। त्यसैले हाम्रो संस्कृतिमा तुलसीलाई आँगनमा रोपिने कुरा गरिन्छ। यसको किरा फट्यांग्रालाई धपाउने विशेष प्रकारको गन्धका कारण कुनै पनि लामखुट्टे वा माखा आदि किराहरु यसका नजिक पर्न सक्दैनन्। त्यसैले प्रत्येक घरको आँगनमा यसलाई रोप्दा त्यस प्रकारको किराफट्यांग्राले घरमा प्रवेश गर्न नपाउन् भनेर नै त्यस्तो संस्कृतिको शुरुवात भएको हो। यसले गर्दा घरवरपरको वातावरण त शुद्ध हुने नै भयो साथै किराआदिको टोकाइबाट पनि बचिने भयो। घर शुद्धिकरण गर्ने प्राचीन महर्षिहरु (जो त्यसबेलाका वैज्ञानिक पनि थिए)को यो काइदा राम्रो छ।
आयुर्वेद चिकित्सामा तुलसीलाई बहुउपयोगी औषधिको रुपमा हजारौं वर्षदेखि प्रयोग गरिंदै आएको छ। यसका पातमा पाइने उडनशील तेलहरु, अर्सोलीक एसिड, युगेनल, लुटियोलिन आदिजस्ता केमिकल तत्वहरुले यसलाई एउटा शक्तिशाली औषधिको रुपमा स्थापित गरिदिएका छन्। विशेषतः यसको प्रयोग श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगहरुमा गरिँदै आएको छ। श्वासप्रश्वासका रोगमा प्रयोग हुने अधिकांश आयुर्वेदिक औषधिहरुमा प्रमुख तत्व तुलसी नै हुन्छ। हामीकहाँ गाउँघरमा सामान्यस रुघाखोकी र ज्वरो आउँदा तुलसीको पात पकाएर ख्वाउने त चलन नै छ। त्यसैगरी यसले हरेक प्रकारका संक्रणहरुलाई कमजोर पार्ने क्षमता राख्दछ। अरुचि र पेटका सामान्य समस्याहरुदेखि लिएर मुटुरोग सम्मका विरामीलाई तुलसीको सेवन लाभदायक मानिन्छ। तुलसीको एन्टीअक्सीडेन्ट गुणले गर्दा यसलाई मधुमेहजस्ता रोगमा लाभकारी पाइएको अनुसन्धानहरुले देखाएका छन्।शहरी क्षेत्रमा वायु प्रदुषणका कारण अधिकांश मानिस रुघा, खोकी लगायतका दर्जनौं समस्याले पिडित भएको पाउँछौं हामी। आहार विहार आदि विभिन्न कारणले शरीरको प्रतिरोध क्षमता पनि कम हुने हुँदा हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि यस्ता समस्या परेका व्यक्तिलाई यिनै सामान्य विमार पनि भयंकर रोगको रुप धारण गर्दछन्। त्यसैले तुलसीको नियमित प्रयोग त्यस्ता व्यक्तिका लागि अझ लाभदायक सिद्ध हुन सक्दछ। त्यसैगरी सामान्य किसिमका ज्वरोका रोगीहरु तुलसीको सेवनले ठिक हुन्छन्। सामान्य रुघाखोकी र ज्वरो आउँदैमा पसलमा गएर औषधि किनेर खाइहाल्नु पर्दैन। सबभन्दा पहिले आफ्नै वरपर र भान्सामा भएका तुलसी, मरिच, अदुवा, बेसार, ल्वांग जस्ता चिजहरुको प्रयोग गरेमा पनि ती निकै लाभकारी हुन्छन्। आयुर्वेदका र जडिबुटीका धेरै सन्दर्भ पुस्तकहरुमा तुलसीको प्रयोग गर्ने तरिका र यसको उपयोगको बारेमा धेरै सामाग्री पाइन्छन्। तसर्थ तुलसी यसरी प्रयोग गर्ने, वा यो गर्ने र त्यो गर्ने भन्ने सिकाइरहनु भन्दा पनि तुलसी प्रयोग गर्न उत्साहित गनुपर्ने छ।
केवल ओखतीहरुमा मात्र होइन, आज विश्व प्रसिद्ध सौन्दर्य प्रसादन उत्पादक कम्पनीहरुले तुलसीको सुगन्धलाई आफ्ना उत्पादनमा प्रयोग गरीरहेको अवस्था छ। विश्व बजारमा “होलि बेसिल” को सुगन्धलाई अत्तर र फ्रेशनरको रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। यसरी कुनै न कुनै बहानामा तुलसीलाई प्रयोग गरिरहेका पश्चिमाहरुलाई हामी त्यहीं तुलसीलाई भगवान मान्नेहरुले के तर्क प्रस्तुत गर्न सक्छौं ? खै त हाम्रा नेपाली वस्तु वा उत्पादनहरु जसले वास्तवमा तुलसी पूजाको यो यथार्थलाई प्रमाणित गर्न सकून् ? औषधिदेखि अत्तरसम्म र चुईंगगमदेखि चियासम्ममा तुलसीको फ्लेवर बेचिरहेका विदेशीहरुलाई हामी के बेच्न सक्छौं त तुलसीको? यसबारेमा के कसैले फुर्सदले सोचेको होला त?
व्यवसाय त परै जाओस्! हामीले त स्थानीय रुपमा प्रयोग पनि गरिरहेका छैनौं तुलसीलाई। साँच्चै छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने हामी एक प्रतिशत पनि नेपाली छैनौं होला जो सामान्य रुघाखोकी वा ज्वरोमा तुलसीको पात चुँडेर त्यसलाई पकाएर सेवन गर्दछौं। आज दिनभर निराहार व्रत बसेर तुलसीको पूजा र विवाह गर्ने आमा दिदीहरुलाई तुलसीको यो महत्वबारे थाहा छ कि छैन? धर्म र संस्कृतिको नाउँमा बिना अर्थ हामीले कतिपय अनावश्यक रुढीहरुलाई पछ्याउँदै आइरहेका छौं। जसलाई जरैबाट उखेल्नु अत्यावश्यक छ। तर सही ज्ञानको अभावमा प्रशस्त वैज्ञानिक आधार बोकेका “तुलसी पूजा”जस्ता दिनहरु पनि भविष्यमा अर्थहीन र रुढी हुने त होइनन्? यसतर्फ कसले सोच्ने?
नेपालका गाउँघरमा स्थानिय रुपमा तुलसी लगायतका जडिबुटी र भान्साका वस्तुहरुलाई औषधिको रुपमा प्रयोग गर्ने जुन सिप छ त्यो दिनप्रतिदिन लोपोन्मुख छ। आधुनिकताको फोस्रो आडम्बर ओढ्न उद्दत हामीले हाम्रो संस्कृतिभित्र रहेको वैज्ञानिक पक्षहरुलाई केलाउन सकेका छैनौं। त्यसैको फलस्वरुप तुलसीको पूजा पनि एउटा कर्मकाण्डमा मात्र सिमित हुन पुगेको छ। सन्तानलाई जस्तै पालेर, हुर्काएर बिहे समेत गरिदिनुपर्ने यो विरुवाको प्रयोग स्वास्थ्य र आरोग्यका लागि नभई धार्मिक प्रयोजनमा मात्र सिमित हुन पुगेको छ। अझ अनौठो कुरा त के भने हामी आफ्नै आँगनको तुलसीमाथि विश्वास नगरी केवल तुलसीकै मात्र प्रयोग भएका खोकीका झोल औषधिहरुको पैसा तिरीतिरी किनीरहेका छौँ र भारतीय औषधि उद्योगहरुलाई धनी बनाइरहेका छौं। यो कस्तो परनिर्भता?
हिजोआज तुलसी चियाले लोकप्रियता त पाएको छ, तर त्यो पनि आफूले जानेर नभै गोरो छालाले “हर्बल टी” भन्ने नाम दिएर त्यसो गर्न सुझाव दिएकाले हो। तुलसीको बीजारोपणदेखि विवाह संस्कारसम्म उत्सवका रुपमा धुमधामले मनाउने पनि हामी, र यसको सेवन गर्न पनि हामीलाई अरुले नै सिकाउनु पर्ने। यो कस्तो विडम्बना ? वास्तवमा हामीले जे गर्दै आएका छौं त्यसलाई वैज्ञानिक दृष्टिले हेर्ने परिपाटी छैन हामीकहाँ। अरुले नै प्रमाणित गरि सिकाइदिएपछि मात्र हामी त्यसको अनुसरण गर्न लालायित हुन्छौं हामी। यहीं हाम्रो पछौटेपनले गर्दा नै हामी आज जहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ छैनौं। अब त्यस्तो पछौटेपनलाई संस्कृतिको रुपमा विकास नगरी आफ्नै मौलिक सभ्यता र संस्कृतिका सकारात्मक पक्षहरुमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बेला भएन र?
तुलसीको विरुवा रोप्ने दिन